डा. अरुणा भन्नुहुन्छ कोरोना भाइरससँगै रोग प्रतिरोधी बन्न बेसार देखि जिरासम्म अमृतबुटी
गृहपृष्ठ » स्वास्थ्य » डा. अरुणा भन्नुहुन्छ कोरोना भाइरससँगै रोग प्रतिरोधी बन्न बेसार देखि जिरासम्म अमृतबुटी
बुधबार १० असार, २०७७
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना महामारी लगातार बढ्दैछ । अहिले १० हजार ९९ जना कोरोना संक्रमित भएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ । अहिले नेपाल मात्रै नभएर सिंगो विश्व नै यस्को उपचार खोज्दैछ् । यो बीचमा नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक अदुवा, लसुन, बेसारजस्ता कुराहरु उपयोगि हुने बताउँदै आउँनु भएको छ । एकथरीले यस्लाई सकरात्मक रुपमा लिएको भए पनि अर्का थरीले आलोचना गरिरहेका छन् ।
यस विषयमा बरिष्ठ जनस्वास्थ्य चिकित्सक अरुणा उप्रेतीले पनि आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ । नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा उहाँलाई धेरै चिन्छन् । उमेरले ६० वर्ष पार गर्नुभएकी उप्रेती स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेको ३५ वर्षभन्दा धेरै भयो । स्वास्थ जीवनका लागि अहिलेसम्ममा उहाँले पोषणका बारेमा धेरैलाई सचेत गराउनु भएको छ । अहिले पनि उहाँले पोषणसम्बन्धी जनचेतनाका लागि सक्दो पहल गर्दै आउँनु भएको छ । उहाँका अनुसार नेपालीको स्वास्थ्यमा दैनिक समस्या बढ्दै गइरहेको छ ।
उहाँले लेखमार्फत होस् कि प्रत्यक्ष रुपमा होस् नेपालीहरुलाई खानपानका बारेमा धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ । उहाँको विचारमा नेपालीहरू जबसम्म पोषणका बारेमा सचेत भइसक्दैनन् तबसम्म उहाँ यो अभियानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लाग्नु हुनेछ । परिवर्तित समयसँगै आम नेपालीको दैनिक खानामा पनि निकै परिवर्तन भइरहेको छ । मोटोपन, मधुमेह, प्रजनन् जस्तो स्वास्थ्यमा समेत हामीले खाने खानाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो बीचमा उहाँले अहिले प्रधानमन्त्रीले चर्चा गरेको उपचारबारे पनि चर्चा गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँ यस्तो लेख्नुहुन्छ ।
‘जडिबुटी भएको तत्व हामीले पनि एक महिना अघिदेखि प्रयोग गर्न थालेका छौं । यी सबै वस्तु भान्छामा सजिलै पाइन्छन् । यी मध्ये कुनै वस्तुमा ‘एलर्जी’ भएका व्यक्तिहरु बाहेक सबैँलाई रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउन यी सबैको धुलो खान सकिन्छ भनेर एक दिदीले सिकाएकी हुन् । तर यो खाँदा चाहिँ ‘कोरोना’ लाग्दै नलाग्ने वा ‘छु’ गरेर भाग्दैन । तर रोगसँग लड्ने शक्ति चाहिँ बलियो हुन्छ भनेर सिकाएकी थिइन् । पानीमा हल्का एक चम्चा खाने गरेकी छु । मास्क लगाउनु त पर्छ नै, साबुनले हात धुन त बिर्सन हुँदैन । १–१ पाउ धुलो बेसार , जिरा, धनियाँ सुठो अदुवा, दालचिनी, कालो मरिच, मुङ्ग्रेलो, पिपला, मुलेठी अमलाको, सहजनको धुलो, गुर्जुको धुलो ।’
६ महिनाको गर्भ समेत गर्भपतन गर्न पाउने कानून आयो
नेपालमा नै भयो १४ दिनको नवजात शिशुको ‘जटिल शल्यक्रिया’
कानून सङ्कायमा स्नातक उत्तीर्ण नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्रीको पहिलो उद्घोष
शारीरिक सम्बन्धपछि ब्वाइफ्रेण्डले खोले आफ्नो रहस्य, युवती डराएर काम्न थालिन्
कोभिडविरुद्ध सफल परीक्षण भएको खाने औषधि कति प्रभावकारी ?
खोकीलाई सामान्य ठाने ज्यानपनि जानसक्छ, यी उपाय तत्काल अपनाउनु
पेटमा किरा कसरी पर्छ ? लक्षण र घरेलु उपचार विधि जान्नुहोस्
कस्ता मान्छेलाई हुन्छ उच्च रक्तचाप ? सजिलो घरेलु उपचार थाहा पाउनुहोस्